Izindatshana zikaJoe Andrews Martech Zone |
Imibhalo nge UJoe Andrews
UJoe Andrews uyi-VP ye-Product and Solution Marketing ku NgaphakathiBuka futhi ubelokhu eqhuba imali engenayo njengesikhulu sokumaketha ngokukhula okuphezulu, izinkampani zobuchwepheshe eziphazamisayo iminyaka engama-20 +. Kwa-InsideView, uJoe uhola isu lokumaketha lomhlaba wonke, ukubeka nokuqalisa imikhiqizo emisha nezingxenye zemakethe. Phambilini uJoe wayephethe izikhundla zobuholi bokumaketha eZuora, VMware, Intuit naseMarket Inc. (inkampani ye-D & B). Ungalandela uJoe Twitter futhi LinkedIn.
Izinyathelo ze-4 Zokucija Ukugxila Kwakho Okuya Emakethe ngo-2019
ULwesine, April 4, 2019 ULwesine, April 4, 2019 UJoe Andrews
Njengoba sikhuphukela ku-2019 ophumelelayo, isihloko esisodwa esingaphezulu kwengqondo kubaholi abaningi bezentengiso nabathengisi be-B2B engikhulume nabo isu labo lokuya emakethe. Okubhekela abaphathi abaningi ukuthi ngabe inkampani yabo ibhekise ezingxenyeni ezifanele zemakethe nokuthi bakulungele kangakanani ukusebenzisa isu labo. Kungani kunendaba lokhu? Ukuba necebo eliqinile lokuya emakethe kuhlobene kakhulu nokusebenza kwemali engenayo. Ekuhlolweni kwethu kokugcina okungu-500
NgaphakathiView Fuels Go-to-Market Success with Targeting Intelligence
NgoLwesithathu, Agasti 2, 2017 NgoLwesibili, Agasti 1, 2017 UJoe Andrews
Ingcindezi kuma-CMOs iyanda ngokushesha njengoba inikezwa umthwalo oqondile wokukhula kwemali, kufaka phakathi izisetshenziswa eziningi zesabelomali nezinhlelo zokwenza kwenzeke. "Kuhle," usho! Ekugcineni inhlonipho ethile yabathengisi. Kepha inselelo manje ukuthi babanjelwe kakhulu ukuletha imiphumela elinganisekayo - futhi ngokushesha. Isithiyo esikhulu empumelelweni amaqembu wokumaketha awanamakhono abalulekile adingekayo ukukala umthelela wawo ekukhuleni kwemali engenayo yenhlangano (isb. Imininingwane yokushayela